ကုံလုံဆရာတော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ကုံလုံဆရာတော်
Posted by weiwei on Apr 3, 2013 in Local Guides, Photography, Travel | 16 comments
wei's photos ကံုလံု
ပုံ (၁) ဆရာတော် ရုပ်ကလာပ်စံမြန်းရာနေရာ
ပုံ (၂) ကုံလုံ အရုဏ်တက်ချိန်
ပုံ (၅) ဆရာတော်ကြီး ရုပ်ကလာပ်
ပုံ (၇) တောင်ကုန်းပေါ်မှ စေတီများ
ပုံ (၉) အာရုံခံတန်ဆောင်းများနှင့် စေတီများ
ပုံ (၁၀) ခမ်းခမ်းနားနား လှလှပပ
ပုံ (၁၁) ဆရာတော်ကြီး ပုံတူရုပ်ထု
ပုံ (၁၂) ဓမ္မာရုံတွင်းပိုင်း
ပင်းတယမြို့ကနေ နာရီဝက်လောက်ကားစီးသွားရင် ကုံလုံကိုရောက်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီး သက်တော်ထင်ရှားရှိတုန်းကဆိုရင် အရမ်းစည်ကားခဲ့တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားစေတီတွေနဲ့ ဓမ္မာရုံကြီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဆရာတော်ရှိစဉ် ရောက်ဖူးတုန်းကဆိုရင် လူတွေအများကြီး စည်ကားနေပြီး ဆရာတော်ကြီးကို ဖူးမြင်ရဖို့အတွက် စောင့်ဆိုင်းနေကြရလေ့ရှိလို့ အချိန်အများကြီးပေးပြီးမှ သွားရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဆရာတော်ကြီးရုပ်ကလာပ်ရှိရာကိုတန်းသွားပြီး ဂါရဝပြုကန်တော့ပြီးရင် ပြန်ရုံပဲရှိတာမို့ အရင်ကလောက် မစည်ကားတော့ပါဘူး။ အဆောက်အဦတွေကတော့ အရင်ကထက်တောင် ပိုလို့ကောင်းပြီး ပိုမိုခေတ်မှီနေပါတယ်။
ဘန်ကောက်မှ ထုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ကြီးပုံတူရုပ်ထုရှိရာ ဓမ္မာရုံတစ်ခုထဲကို ဝင်ဖူးခဲ့ကြတယ်။ တကယ့်လူအစစ် ထိုင်နေတဲ့အတိုင်း လက်ရာကောင်းလှတဲ့ ရုပ်ထုကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကြီးမားလှပ ခန်းနားမှုတွေကို တအံ့တဩငေးမောကြည့်ရင်း ယခင်ဆရာတော်ကြီး တန်ခိုးကြီးခဲ့တာတွေကို အောက်မေ့သတိရရင်း ကုံလုံကျောင်းတော်ဘက်ကို တစ်ခါက် ရောက်ခဲ့ပါတယ် …….
မရောက်ဖူးတဲ့နေရာက သိသင့်တာတွေမြင်ရလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ
ကုံလုံကျောင်းက နေလည်စာကျွေးသေးလားဟင် ??
ဆရာတော်ကြီး ပျံလွန်တော်မမူခင်က သွားဖူးတော့ ကျွေးကြတယ်။
မနက်စောစောသွားပြီး ချက်ခြင်းပြန်လာခဲ့လိ်ု့ မသိလိုက်ဘူး ..
မကျွေးတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် …
မရောက်ဖူးတဲ့နေရာက ပုံတွေမြင်ရလို့ ကျေးဇူးပါ မဝေရေ..
ထူးခြားတာကတော့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လက်ရာကောင်းလှတဲ့ ပုံတူရုပ်ထုက
နောက်..ပုံ ၉၊ ၁၀၊၁၂ တွေမှာ စစ်ယူနီဖေါင်းဝတ်တွေတွေ့လို့
ပုံတူရုပ်ထုကတော့ အရမ်းကိုတူပါတယ် … မှဲ့ခြောက်လေးတွေ၊ မွေးညှင်းလေးတွေကအစ အသေးစိတ် ထုလုပ်ထားတာပါ …
စစ်သားတွေက မြန်မာ စစ်ဗိုလ်လေးတွေပါ …
သင်တန်းအတွက် လေ့လာရေးသဘောမျိုး ရောက်နေကြတာပါ … အယောက် ၃၀ဝ လောက်မို့လို့ ဓါတ်ပုံထဲ ရှောင်ရခက်သွားပြီး နဲနဲပါသွားတာ … တကယ်က အပြင်မှာ တစ်ဝင်းလုံး စိမ်းစိမ်းတွေချည်းပဲ …
ကုံလုံ ဆရာတော်ကြီး ကျောင်း သွားတဲ့ လမ်းမှာ သစ်ပင် အကြီးကြီးတွေ ရှိတယ်.. အရမ်းသာယာတယ်.. ပြီးခဲ့တဲ့ အခေါက် သွားတုန်းက အမှတ်တရ ရှိခဲ့တာ.. ကျောင်းနား ရောက်ခါနီး သစ်ပင်ကြီးတွေ မြင်နေရချိန်မှာ ခရီးသွား ဦးဆောင်တဲ့ ဂိုက် အမျိုးသမီးလေးက ကုံလုံ ဆရာတော်ကြီး ၏ ရုပ်ကလာပ် ကို သွားဖူးမှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဆရာတော်ကြီး နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ရာဇဝင်တွေ အကြောင်း ပြောပြခဲပါတယ်။
“တခါတုန်းက ဆရာတော်ကြီး ရှိစဉ်က ကျောင်းကို ဓါးမြ ဝင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီး ကို လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ပြီး ကျောင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ယူဆောင် သွားခဲပပါတယ်။ ဒကာတွေ လာတဲ့ အခါ ဆရာတော်ကြီး ကို ကြိုးတုတ် ထားတာကို ဖြေပေးပြီး ရဲတိုင်မယ် လုပ်တော့ မတိုင်ပါနဲ့ ဆိုပြီး တားခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီထဲမှ ဒကာ တယောက်က ဆရာတော်ကြီး ကို မပြောပဲ တုတ်ခဲ့တဲ့ ကြိုးကို မီးရှို့လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဓါးမြ က ဘယ်သူဆိုတာ သိပေမဲ့ ဆရာတော်ကြီး က လုံးဝ မပြောပဲ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်.. ကြိုးမီးရှို့လိုက်တဲ့ အခါ ခိုးသွားတဲ့ ဓါးမြ အိမ်က အလိုအလျှောက် မီးထတောက်ပြီး အဲ့ဒီ လူရဲ့ အိမ်က မီးထဲ ပါသွားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဓါးမြ ၂ယောက်က လာပြီး ဆရာတော်ကြီး ကို တောင်းပန်ပြီး ကန်တော့ အပြစ်ဝန်ခံသွားပါတယ်။”
အဲ့ဒါ လမ်းမှာ ကျောင်းရောက်ခါနီး ဂိုက် အမျိုးသမီးလေး ပြောသွားတာပါ..
ကျောင်းရောက်တော့.. ဆရာတော်ကြီး မှန်အခေါင်းနားမှာ ရှိတဲ့ ဒကာ တယောက် ကို ဟိုမေး ဒီမေး လိုက်တဲ့ အခါ.. သူပြောချေ အရကတော့ ဆံပင်တွေ လက်သည်းတွေ မကြာမကြာ ညှပ်ပေးရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း…
ဆရာတော်ကြီး ရုပ်ကလာပ် ကို မှန်အခေါင်းထဲ အလုံ ထည့်လိုက်လို့.. မျက်နှာ တဖက် နည်းနည်း မည်းသလို ဖြစ်သွားတာ နဲ့ သိသိချင်း ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ.. အလုံပိတ်ထားတာကို ပြန်ဖွင့်ပေးရတယ်လို့ ပြောတာ မှတ်မိသေးတယ်။
ဆရာတော်ကြီး မျက်နှာ အနေအထား ပုံမှန် လူ တယောက်လိုပဲ.. အဲ့ဒီ တုန်းကတောင် ၁နှစ်လောက် ရှိနေပြီ ဆိုပေမဲ့..
အရင်ကတော့ အဲ့လို အဆောက်အအုံ တွေ မရှိသေးဘူး။
တီတီဝေ ရေ ..
ရုပ်ကလာပ်တော်ကို ဖူးမြော်လို့ သွားပါတယ်ဗျို့ ..
ရှုခင်းပုံလေးတွေကိုလည်း အားပေး ကြည့်ရှု သွားဘာဒယ်ဗျို့ …
မန္တလေးဂဇက် ပထမဆုံးအကြိမ်စထုတ်တဲ့.. ၂၀၀၆ဇူလိုင်ထုတ်အတွက်.. ယူအက်စ်-အယ်လ်အေကဒေါက်တာစံအေး (မျက်စိအထူးကု)ကို အင်တာဗျုးပြီး.. ဖေါ်ပြခဲ့တယ်..။
ဆရာကြီးဦးစံအေးက.. မြန်မာဆရာတော်ကြီးတွေတော်တော်များများရဲ့.. မျက်စိတွေကိုခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့တာ…
အဲဒီထဲ.. ကုံလုံဆရာတော်ကြီး အမေရိကားကြွလာပြီး..ဆေးကုခံတဲ့အကြောင်းလည်း… ပါတယ်..။
ဆရာတော်ကြီး ရုပ်ကလာပ်ကို မပုပ်မသိုးအောင် ခွဲစိပ်ထားပါသလား။
ဒါမှမဟုတ် ယခင် သာမညဆရာတော်လို သူ့အလိုလို မပုပ်မသိုးတာလားပေါ့။
အပေါ်က ဆူးကွန်းမန့်မှာလဲ တွေ့ရတယ် … လက်သည်းခြေသည်းတွေ ရှည်လာတယ်ဆိုလို့ …
အဲဒါလဲ အားလုံး သိသင့်တာပါပဲ
အဲဒီအမေးကိုတော့ မသိလို့ မဖြေပါရစေနဲ့ …
မစပ်စုမိခဲ့ဘူး … :hee:
သိတဲ့သူများရှိရင် ဖြေပေးစေချင်ပါတယ် …
ခွဲစိတ်ထားလားလို့တော့ မမေးမိပေမဲ့.. ဆရာတော်ကြီး သေသွားပြီးနောက်ပိုင်း ဒီတိုင်းပဲ ထားထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်.. မှန်အခေါင်းထဲမှာ လေအရမ်းလုံအောင် ထည့်မိလို့ မျက်နှာ တဖက် အရောင်နည်းနည်းပြောင်းသလိုဖြစ်လာလို့.. ပြန်ဖွင့်ပေးထားရတယ်။ အဲ့လိုတော့ အတိအလင်း ပြောတာ မှတ်မိနေပါသေးတယ်။
သဘာဝ အတိုင်း လက်သည်းတင် မဟုတ်ဘူး ဆံပင်လေးပါ ရှည်ထွက်တယ်.. ပြီးခဲ့တဲ့ ဆံပင် လေးတွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင် မြင်ခဲ့ရတယ်။ တချို့ကတော့ လက်တဆစ်လောက် ရှည်နေတာ မြင်ခဲ့တယ် ဘာညာပြောတာ ကြားမိတယ်။
ပုံတွေကြည့်ရတာ တော်တော်လေး သန့်ရှင်းသပ်ယပ်နေသလိုပဲ။
ဆရာတော်ကြီး ကုလားထိုင်မှာ ခြေချထိုင်နေတဲ့ပုံစံ ရုပ်တုလဲ ရှိတယ်ထင်တယ်။
ကုံလုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ ရုပ်တုကို ဖူးဘူးတယ်။
စိတ်ထဲမှာ သက်ရှိဆရာတော်ကြီးကို ဖူးရသလိုပဲ။
ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးပဲလား ( သဂျီး မမြင်ပါစေနဲ့ ) လို့တောင် ထင်မိတယ်။
ဟီဟိ သဂျီး မမြင်ပါစေ နဲ့တဲ့။ သဂျီး က wai wai အရင် ဖူးပြီးနေပြီ။